McAfee AntiVirus + AntiSpyware 8.5i Enterprise [Licensed] — MYSTERY ZILLION
McAfee AntiVirus + AntiSpyware 8.5i Enterprise [Licensed]
ကဲ... MZ ညီအစ်ကို မောင်နှမ တို့ရေ...
Definitions Offline Update Download Link:
အားလုံးကို ခင်မင် လေးစားတဲ့...
ဒေါင်းယုံပဲလားကိုဒီမွန်၇ာ ကိုဒီးမွန်သုံးဖူးတယ်ဆို၇င် mcafee ကိုဘယ်လိုသုံးသင့်တယ် စက်မလေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ပါတင်ပေးပါဦးဗျာ
ကို royal7 ရေ...
ပုံမှန် အားဖြင့်တော့ Install လုပ်ပြီး McAfee Console မှာ ဘာမှ Configuration လုပ်စရာ မလိုပါဘူး...။
ဒါပေမယ့် Security Level ကို သူ့မှာ ရှိတဲ့ Features တွေကို အားလုံးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Unwanted Programs Policy (Task Bar ရဲ့ ညာဘက်ဒေါင့် မှာရှိတဲ့ McAfee Icon ကို Right Click ခေါှပြီး VirusScan Console... ကို ရွေးပါ။) မှာ ရှိတဲ့ Check Box တွေကို အကုန်လုံးသာ Enable လုပ်လိုက်ပါ။
Secutiry DAT file သာ update ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ရှိတာတွေကို အားလုံးတွေ့ပါတယ်။
6. Jokes Programs
7. Key Loggers
8. Other Potentially Unwanted Programs
ကျွန်တော် ခုထိသုံးနေရသလောက်တော့ McAfee တင်လိုက်လို့ စက်က သိသိသာသာ “လေး” သွားတယ် ဆိုတာတော့ သတိမထားမိပါဘူး။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တော့ အကြိုက်ချင်းတော့ ဘယ်တူကြမလဲ နော့...
ကျွန်တော် ခုထိသုံးနေရသလောက်တော့ McAfee တင်လိုက်လို့ စက်က သိသိသာသာ вЂњလေးвЂќ သွားတယ် ဆိုတာတော့ သတိမထားမိပါဘူး။
ကျေးဇူးပါကိုဒီမွန် ကျွန်တော်က တပတ်လောက်ပဲတင်ပြီးဖြုတ်လိုက်လို့ဗျကျွန်တော်စက်နိမ့်တာလဲပါတာပေါ့။နောက်ပြီး သူက ဖိုင်3ဖို်င် ခွဲrun နေတာမဟုတ်လားဗျကျွန်တော်ကမေ့နေပြီ ကီးဘယ်လို၇ှာ၇မလဲစိတ်ညစ်တာ၇ယ် သူ့ကိုတင်ထား၇င် ကွှန်နက်ရှင်ပါလေးသလိုခံစား၇တယ်ဗျ ဟီးဟိး :D ကျွန်တော်ကကစ်စ်ပါသမားဗျ
သူမနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိလာဦးမှာပါ အဲဒီကျမှကိုဒီးမွန်ပြောတဲ့အတိုင်း ပြန်စမ်းလို်က်ဦးမယ်ဗျာ။
offline (internet မချိတ်ထားတဲ ့စက်) မှာ သုံးလို ့ရလားခင်ဗျ။
ပြောချင်တာက ၇ုိး၇ုိး update ရပြီးတော ့ဂျာ။
database update တွေ ဘာတွေ မရမှာဆိုလို ့ပါ။
AVG နောက်ဆုံးဗားရှင်းမှာတွေ ့လိုက်လို ့..အဲဒီလို အဖြစ်မျိုး။
အဲဒါကြောင့်...ဘယ်လို update လုပ်လို ့ရလဲ ဟင် offline အနေနဲ ့ဆိုရင်။
full update ရအောင်။
Offline Update အတွက် ကျွန်တောှ ပေးထားတဲ့ Download Link ကနေ Download လုပ်ပြီးရင် sdatxxxx.exe ဖိုင်လ် ကို install လုပ်ထားတဲ့ စက်တိုင်းမှာ Run ပြီး update လုပ်လို့ရပါတယ်။ Internet မချိတ်ထားတဲ့ စက်တွေမှာလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။ SDAT Update File ထဲမှာ Database Engine ရောပါတဲ့ အတွက်ကြောင့် Engine Update ဖြစ်မဖြစ်ကို စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
window7မှာ မရဖူးထင်တယ်နော်.. ကို ဒီမွန်း.. ကျွန်တော်ဆီမှာ လုံးဝမ၇ဖူးခင်ဗျ။ ။ စစခြင်း setup process တော ့လုပ်တယ်..အဲဒီကောင်ပြီးရင် online solution တန်းတောင်းတာပဲ အဲဒီဟာကနေမတတ်တော ့ဖူး..အဲဒါ နဲ့cancel လုပ်ရင် ပြီးတွားတယ်...ဂျာအေးသူအမေရိုက်ဂျာ..စိတ်ညစ်တယ်..အဲဒါနဲ ့လည်နေတယ် အထင်တော ့window7မှာ မရဖူးထင်တယ်နော်... bitdenfer လည်းမ၇ဖူး..ဂျ..အနော်ဆီမှာ ဆိုးပ
Windows7အတွက် McAfee 8.7.0i ကို အောက်ကလင့်ခ် မှာ ကြည့်ပေးပါ...
auto update ပေးလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်... သူ့ဆိုက်ကို သွားပြီး offline update file ကိုပဲ ဒေါင်းနေရတယ်... ဘယ်လိုတွေ ပြင်ရမလဲဆိုတာ ကူညီကြပါဦး...
ကိုဒီးမွန် အဲဒါက လိုင်စင်ပြဿနာတွေ ဘာတွေရှိလားဟင် တစ်ချို့ဟာတွေက Definition Update လုပ်ရင်ပြဿနာတက်တတ်လို့ မေးကြည့်တာပါ။ အခုလက်ရှိ McAfee လိုင်စင်လေးက နောက်လအလယ်ဆိုရင် ကုန်ပြီ ထပ်ဝယ်ရကောင်းမလား လတ်တစ်လော ဘိုင်ပြတ်ချင်သလိုဖြစ်နေလို့ ခိုးသုံးရမလားစဉ်းစားနေတာ
xybo wrote: »
AutoUpdate အတွက် Configuration ဘာမှလုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ AutoUpdate လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင် ဿFirewall Issue ဘာရှိလဲ စစ်ကြည့်ပါဦး။ McAfee Client ကို တစ်လုံးထက် သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ Offline Update က ပိုပြီးတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒေါင်းပြီးသား SDAT file ကိုပဲ နောက်စက်မျာ Copy ကူးပြီး Run လိုက်ရုံပေါ့။
ကိုလူပျိုကြီး... ခုထိတော့ License ပြသဿသနာ နဲ့ပတ်သပ်လို့ ဘာမှ မရှိသေးပါဘူး။
အခုလက်ရှိ McAfee လိုင်စင်လေးက နောက်လအလယ်ဆိုရင် ကုန်ပြီ ထပ်ဝယ်ရကောင်းမလား လတ်တစ်လော ဘိုင်ပြတ်ချင်သလိုဖြစ်နေလို့ ခိုးသုံးရမလားစဉ်းစားနေတာ
ကျွန်တော့ ဆီကို လစဉ် Subscript လုပ်လေ...:D ကျွန်တောှ ပေးမှာပေါ့...:P